SPC Gravity Octacore, ihe dị ọnụ ala mbadamba na 4G [Analysis] | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-anọgide na-emekọ na a ika nwere ọtụtụ ngwaahịa na ahịa nke fọrọ nke nta niile iche iche, SPC na-aga n'ihu na-eme ka ọchịchị onye kwuo uche ya na ọnụ ahịa dị oke ọnụ nke na-ekpuchi mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ bụ ezie na mbadamba nkume adịghị ka ọ na-agabiga oge ha kachasị mma, ha ka bụ ngwaahịa na-atọ ụtọ iji rie ọdịnaya n'ụlọ na n'èzí ya.
Ọhụrụ anyị na anyị gafere na nyocha nyocha anyị ma chọpụta njirimara ya niile na nyocha a miri emi.
1 Nchịkọta ngwugwu na ọdịnaya
3 Ngosipụta na ọdịnaya dị iche iche
4 Njikọta, ịrụ ọrụ na nnwere onwe
Nchịkọta ngwugwu na ọdịnaya
Ihe mbu nke juru anyi anya banyere ihe di otu a “di onu ala” bu na anyi nwere mbadamba nkume nwere aru di n’azu ya ma ewezuga eriri abuo abuo nke eweputara iji meziwanye ihe 4G, ihe di n’udi a. ngwaahịa. Na azụ anyị na-ahụ naanị akara nke akara na igwefoto, nke nwere ọkụ ọkụ. Anyị na-ahụ na ngwaọrụ na a nke nke 166mm x 251mm x 9mm, dịtụ ebughibu, mgbe ngụkọta ibu na-abịa banyere 550 gram, nha nwere ọtụtụ ihe ime nke a. Ọ bụrụ na ịchọrọ SPC Gravity Octacore ị nwere ike ịzụta ya Ebe a na ọnụahịa kacha mma.
Akụkụ: X x 166 251 9 mm
Ibu ibu: 55 grams
N'akụkụ aka ekpe anyị hụrụ microUSB mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ebugharị na nnyefe data, ọdụ ụgbọ mmiri maka microSD, oghere maka kaadị SIM na jaak 3,5mm iji jikọọ ekweisi. N'aka nri dị n'elu, anyị ga-enwe ike igodo mkpọchi na bọtịnụ olu yana igwe okwu. Mkpọchi ndị a pere ezigbo mpe, na-arụ ọrụ maka ịdị nkenke nke ngwaọrụ ahụ, yana njem ngosi dị mma.
Mbadamba mbadamba ahụ ahapụwo anyị ezigbo mmetụta na-emetụ aka, ọ bụ ezie na anyị nwere okpokoro a ma ama na ihu ma anyị enweghị ụdị mkpọchi biometric.
Akụrụngwa dị ezigbo mkpa na ụdị ngwaahịa a. SPC kpebiri ịkụ nzọ na ngwaike zuru ezu, nke anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ohere niile, mana ịhazigharị ọnụahịa ahụ iji nweta ngwaahịa dị oke ọnụ dị ka o kwere mee.
Ihe nhazi: Unisoc SC9863A 8-isi (4 A35 1,6 GHz na 5 A55 1,2 GHz)
Nchekwa: 64 GB + miroSD ruo 512 GB
N'azụ: 5MP na flash
Njikọ: Bluetooth 5.0, WiFi 5, GPS na 4G
N'ọdụ ụgbọ mmiri: microUSB - OTG, 3,5mm Jack
Batrị: 5.800 mAh
System na-arụ ọrụ: A gam akporo 9 achịcha
Anyị anwalewo mbipute nke 4GB nke Ram na anyị na-ahụ n'ụzọ doro anya na processor nwere ókè mgbe eme, ka ihe atụ, ukwuu na-achọ video egwuregwu. Ya mere, anyị nwere mbadamba nkume nke e mere nke ọma iji rie ọdịnaya nke ọdịnaya, na obere ebumnuche nke ịmepụta ọdịnaya. O doro anya na ọ na-eji agility na ngwa dị ka Facebook, Instagram na netwọkụ mmekọrịta n'ozuzu ya, ebe WiFi 5 na-enye ezigbo arụmọrụ arụmọrụ WiFi ọbụlagodi na netwọk 5 GHz. Anyị ga-edo anya maka ndị na-ege ntị maka ngwaahịa a.
Ngosipụta na ọdịnaya dị iche iche
Anyị na-eche ihu ihuenyo buru ibu, Anyị nwere sentimita 10,1 nke IPS panel nke na-anọ na mkpebi HD, site na m si ele akụkụ kachasị njọ. Igwe ihuenyo FullHD ga-abụrịrị ihe ịga nke ọma na ngwaahịa fọrọ nke nta. Anyị nwere mkpebi ikpeazụ nke pikselụ 1280 x 800. Enweghị FHD dị ntakịrị, karịsịa mgbe anyị chọrọ iri ọdịnaya na Netflix ma ọ bụ Amazon Prime. Maka akụkụ ya, nchapụta nke panel ahụ erughị oke, mana o zuru ezu. Otu ihe a na - eme na akụkụ nlele nke ihuenyo ahụ, iko ahụ na - enye echiche dị oke oke dabere na ọnọdụ, yana dịka n'ụdị dị ọnụ ala nke iPad, anyị anaghị ahụ ihuenyo enyo na iko ahụ.
Zụta ike ndọda Octacore si SPC
Banyere ụda anyị nwere ndị ọkà okwu abụọ na-enye ụda ọkọlọtọ. Anyị achọtaghị ike dị elu kachasị elu, mana ọ nweghị nsogbu ụda "mkpọ". O doro anya na anyị nwere ụda stereo ziri ezi maka oke ọnụahịa ya. Iri ọtụtụ ihe dị na ntụrụndụ nke ihe ndina dị na ezughị ezu. Dịka m kwuru na mbụ, ngwaọrụ enweghị obere mkpebi, ọ gaara adị mma.
Njikọta, ịrụ ọrụ na nnwere onwe
Anyi aghaghi ichefu na Gravity Octacore nke sitere na SPC nwere njikọ 4G, nke ga - enyere anyị aka ịnụ ụtọ 4G ọsọ n’èzí. Anyị anwalela ihe nsonazụ ahụ yiri nke nke ekwentị ọ bụla gbasara mkpuchi na ọsọ. Ngwaahịa a nwere ike ịmasị karịsịa maka njem gaa n'ụsọ osimiri ma ọ bụ ụlọ nke abụọ n'oge ọkọchị a, kaadị 4G nke ngwaọrụ mkpanaka anyị ọ ga-enyere anyị aka iji uru nke njirimara ya. Ihe a niile n'echefughị ​​na anyị nwere ihe nkwụnye microUSB-OTG, yabụ ị nwere ike ijikọ ọdịnaya ozugbo na nchekwa USB.
Maka akụkụ ya 5.800 mAh batrị ọ na-arụ ezi ọrụ, ihe dịka elekere 9 nke ọkpụkpọ vidiyo na-aga n'ihu yana nyocha, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị anaghị achọ ya na egwuregwu vidiyo ma ọ bụ rụọ ọrụ nhazi dị arọ karị.
Ma ese foto anyị nwere mkpebi na arụmọrụ kwesịrị ekwesị iji nyochaa ụfọdụ akwụkwọ ma ọ bụ kpọọ vidiyo. N’etinyeghị echiche ọzọ. Otu ihe a na - eme na arụmọrụ nke ike nke ngwaọrụ ahụ, anyị ga - achọpụta na anyị ejedebeghị na egwuregwu vidiyo vidiyo 3D chọrọ nhazi dị ukwuu, Ezubere GPU, dịka anyị kwurula ọtụtụ ugboro, iji rie ọdịnaya nke ọdịnaya na ịnyagharịa, ebe ngwaahịa a pụtara nke kachasị nye ya nhọrọ nhọrọ njikọ ya.
Na nkenke, anyị na-eche ihu ngwaahịa ntinye nwere ọtụtụ ohere, anyị nwere ezigbo uru maka ego, mmụba na-atọ ụtọ yana karịa oke mmachi na ọkwa teknụzụ, anyị nwere 4G, ọtụtụ nchekwa, USB-OTG na nnwere onwe dị ukwuu gbasara batrị. Ọ bụ eziokwu na ihuenyo dị na mkpebi HD na gam akporo 9 bụ ihe mgbe ochie, mana na-echebara na anyị nwere maka 159 4 nke 135GB nke RAM na naanị € 3 maka ụdị XNUMXGB nke nchekwa RAM adịghị. ọjọọ. Ọ bụrụ na o doo gị anya, ị nwere ike zụta ya na EGO si Amazon na nke gi Ibe weebụ.
Ike ndọda Octacore 4G
Multiple Njikọta ohere nke nile di iche iche
Ezi ihe owuwu na obi iru ala
Uru gbanwere maka ego
Otu FHD na-efu efu
Enwere ike melite ụda ahụ
M gaara abanye na gam akporo 10
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » SPC Gravity Octacore, akụ na ụba mbadamba na 4G [Analysis]
Jupụtara na nkume SSD (500 GB) ihe àjà ihe ọ ultraụ -ụ jupụtara na obere obere draịvụ ike [Review]